[MAQAAL]: Waa Maxay Tilmaamaha/astaamaha laga Rabo Mudanaha U-taagan Doorashada G. deegaanka ee 2019.
Thursday June 07, 2018 - 23:18:47 in Arrimaha Bulshada
Inkastoo bulshadeenu aanay u-bislayn xulashada cida ay dooranayaan, aqoon-ahaan iyo wacyi-ahaaba. Hase yeeshee waxa jira wax-badan oo aynu hagranayno ka bulsho ahaan. Inta badan waxaynu majeeranaa hadba kaynu doorano kii ka horreeyey, halkay ahayd in
Inkastoo bulshadeenu aanay u-bislayn xulashada cida ay dooranayaan, aqoon-ahaan iyo wacyi-ahaaba. Hase yeeshee waxa jira wax-badan oo aynu hagranayno ka bulsho ahaan. Inta badan waxaynu majeeranaa hadba kaynu doorano kii ka horreeyey, halkay ahayd inaynu dhaliilihii ka hore wax ka barano oo lagu bedelo qof ka madhan qaladaadkaas. Si kastaba ha-ahaatee,su'aashu waxay tahay: waa maxay astaamaha aynu ku xulanayno mudanayaasha u-taagan doorashada g.deegaanka ee soosocota?
Dawladaha hoose ee degmooyinka dalku waa unuga dawladeed ee ugu dhow bulshada ( the closest tie of government to the people), loona igmaday inay u-qabtaan bulshada adeegyada asaasiga ah. Mudanayaasha loo doorto golahanina waa kuwo laga rabo inay ku qalabaysan-yihiin waxyaabihii ay u-baahnayd hawshan loo igmaday, sida: aqoon, ammaano, xirfad, waayo-aragnimo, masuuliyad, karti, hufnaan IWM. Si kastaba ha-ahaatee, waxa jira tabashooyin iyo dhaliilo xoogan oo ay bulshada qaybaheeda kala duwani usoo jeedinayaan xildhibaanada golaha deegaanka ee hadda jooga. Dhaliilaha dul-hogana mudanayaashan waxa ka mida: aqoon darro, ammaano la’aan, musuq-maasuq, masuuliyad darro, xirfad la’aan, karti xumo iyo guud-ahaan inay yihiin kuwii ugu liitay ee abid la doorto, la xulo ama la magacaabo ( elected, selected or appointed). Tusaale ahaan waxaa la sheegaa in xubno ka mida xildhibaanada hadda jooga ee caasimada Hargaysa, gaar ahaan masuuliyiinta ugu saraysa golaha, ay safar shaqo ugu baxeen dalka debediisa, ka-dibna ay la kulmeen masuuliyiin ka tirsan wadamadii ay tageen, isla markaana la weydiiyey su’aal ah: "waa maxay aragtida (vision) ay u-taagan tahay dawlada hoose ee Hargaysa ee la idiin doortay?” kuna jawaabeen: " waxaanu u-taaganahay raadinta aqoonsiga S.land!” -------------- " iyana waa tabaahalaha waqtiga, taynu aragnaaye, tukaloo ka daran baa jirtee, taana bal aan sheego,” X. Adam.
Yeelkeedee, waxaa is weydiin leh: a) maxay ugu xilanay dadka noocan ah? b) ma aqoon baynaan ulahayn oo wey inoo gabadeen? c) ma cid dhaantaynu weynay? d) ma sababo kale ayaa jira oo qasbaaya in la doorto dadka noocan ah? su’aalahan markaan is waydiiyo waxaa aad isoo jiita baydadkan aan ka soo qaaday tix uu tiriyey: Sicid Ibrahim Dol, wuxu yidhi:
ma-adaa marka tiir la rabo,
tukube boocaha ka jira,
ma-adaa tiin qodax-lehiyo,
taabkaaga ku beerta ciin,
haddana timir aad cuntiyo,
tufaax bisil laab ka jecel,
ma-adaa tukayaal korsada,
wax kale kama taransatide,
tabcadda uu soo watiyo,
tabtiisa nimaad ogtahay,
xeeshiisana aad taqaan,
inaad sacabka u-tuntaa,
sirbay ku tallaalantee,
tafsiir waxa kuu qarsoon?
tollaay ruux lagu boqraday,
qabiil tartarkii ku yimi,
muxuu qaranka u taraa?
dhurwaa tulud raac la yidhi,
intuu la tacaalayaa?
Haddaba, si aanay u dhicin shalay dhaantay, una gaadhno beri maanta ka fiican, waxaynu ubaahanahay maanta ayaa aynu fursadii haysanaaye in aynu ka fiirsano cida ina metelaysa. Aragtidayda, shuruudaha looga baahanyahay musharaxiinta utartamaysa doorashada golaha deegaanka soo socota waxaa ugu mudan kuwan: aqoon, ammaano, hogaamin, khibrad, hufnaan, masuuliyad, karti, daacadnimo, xirfad IWM. Walow ay adagtahay in la helo qof kulmistay dhammaan astaamahan, haddana waa lagama maar-maan.
Ugu danbayn, maqaalkan kooban ee aynu ku eegayney waxyaabaha lagu xulan karo mudanayaasha u-taagan doorashad g.deegaanka ee 2019. Sidoo kalena aynu si kooban ugu iftiiminay ra’yul caamka bulshada ee ku aadan mudanayaasha hadda jooga, waxaynu ku soo afmeeraynaa baydad Alle bari ah oo aan ka soo qaaday gabay wuu tiriyey Nageeye Cali Khalif, wuxuu yidhi:
• Allahayow hoggaan lagu hirtoo horumar doonaaya
• Allahayow hoggaan aan bulshada hayb u kala soocin
• Allahayow hoggaan aan qabiil hoosta kala shawrin
• Allahayow hoggaan aan tolnimo reerna ugu hiilin
• Allahayow hoggaan danaha guud daacad ugu heelan
• Allahayow hoggaan dawlad iyo himilo doonaaya
• Allahayow hoggaan aan kufriga heeryada u qaadin
• Allahayow hoggaan diinta iyo haysta dhaqankayga
• Allahayow hoggaan lagu degaan haabka ku hayaaye
• Maruun noo hirgeli guulahaan ku hindisoonayno
W/Q: Maxamuud Cabdi Faarax